Sidee loo hagaajiyaa qiimeynta bogga qaangaarka ee qaangaarka ah?
Maalmaheena SEO wuxuu door muhiim ah ka leeyahay horumarinta ganacsi kasta haddii aad leedahay hudheel cunto fudud ama dukaamada jinsiga. Labada xaaladoodba, ujeedada ugu muhiimsan ee ganacsigu waa inuu soo jiito dad badan oo soo booqda oo kordhiya dakhligooda. Maalmahan si aad ganacsigaaga ugu barwaaqowdo, waxaad u baahan tahay inaad ku dhigto internetka oo aad wax ka beddesho iyadoo la eegayo dhamaanba qaybaha search engine. Qodobka sare waxaad ku dareysaa SERP, iibka badan ee aad haysato.
Awoodda raadinta gawaarida dadka waawayn ayaa la mid ah sidii loo hagaajin jiray caadi ahaan iyada oo farqiga kaliya ee nidaamka dhismaha isku xirnaanta. Faa'iidada ugu weyn ee SEO dadka waaweyn waa in aad kuxirin kartaa website-kaaga ee ku yaala boggan si sahlan sababta oo ah tartan tartiib tartiib ah. U hubso inaad haysatid hab aad isku-hagaajinayso gaadiidkaaga, maadaama uusan raqiis ahayn.
Aan ka falanqayno sida loo wado gaadiidka tayada ee goobtaada qaangaarka oo aad u hesho TOP Google. Waxaa jira afar qaybood oo ugu muhiimsan SEO-yada oo ugu adeega ololayaal kasta oo wax ku ool ah iyo sidoo kale qaabeynta wacyigelinta ee dadka waaweyn: bogga ku habboon, maamulka domain, xiriiriyaha sireedyada, xidhiidhada soo socda.
Ku-tiirsanaanta bogga shabakadda waxay u adeegsaneysaa heerka saameynta Google. Waxay muujinaysaa labada isticmaale iyo shabakad labadaba sida ugu haboon ee bogga gaarka ah ee bogga su'aalaha. Si aad u sameysid goobtaada ku habboon, waxaad u baahan tahay in aad wax ka beddesho metadata iyo content. Ugu horreyntii, waxaad u baahan tahay inaad ku darto weedho muhiim ah oo ku jira boggaaga internetka, koobab, sharaxyo iyo qodobbo hoose si aad u hubiso in macaamiishaada iman kara ay kuugu sahlanaan karaan boggaaga. Waxaa intaa dheer, waxaad ubaahan tahay inaad abuurto waxyaabo badan oo tayo leh intii suurtagal ah. Xaaladda goobaha qaangaarka ah, waxaad ku qori kartaa sheekooyin erotic ah oo daabacaan toddobaadle.
Maamulaha Domain waa mid ka mid ah qodobada muhiimka ah ee ra'yiga ah in runtii la sheegi karo inaysan sameynin habeyn. Waxay qaadataa wakhti wakhti ay ku qaadato maamulka bogga. Si loo hagaajiyo maamulka domain, waxaad u baahan tahay inaad si gaar ah u fiiriso naqshadaynta boggaaga iyo abuuritaanka olole ku dhisan dhisida natiijada. Waxaa intaa dheer, maamulka shirkada waxaa saameyn ku leh noocyada arrimaha bulshada sida isbarbardhiga-celceliska, is-beddelka, wakhtiga celceliska ah ee isticmaalaha bogga iyo heerka bounce. Waxaa intaa dheer, waxaad ubaahan tahay inaad cabirto awoodda xiriiradaada soo galeysa maaddaama ay tahay qodob muhiim ah oo saameeya goobta qaangaarka ee SEO. Waxaad u baahan tahay inaad boggaaga ku dhejiso oo kaliya meelaha ugu sarreeya iyo kuwa mudda dheer soconaya ee isticmaala dadka isticmaala. Waxay kaa caawineysaa inaad ku riixdo boggaaga qaangaarka ee horay u ah macaamiisha dhiirigeliya. Waxaan kugula talinayaa inaad ka fekerto xajmigaaga xariirkaada iyo sidoo kale tayada ay hayso. Waxaa intaa dheer, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in aad dhabarkaaga dib u dhigto oo ku habboon tiirarka suuqa. Tusaale ahaan, waxay u egtahay mid la yaab leh haddii aad ku xirto boggaaga qaangaarka ee dadka waaweyn ee ku jira aalad bixisa cuntada ilmaha.
Maadaama Google uusan aqbalin xayeysiisyada PPC ee goobaha qaangaarka, waxaa jira habka kaliya ee dibadda loogu maalgeliyo gawaarida raadinta raadinta. Waxaan rajeynayaa in hababka wax-ku-oolka ee aan ku soo xushay qodobkan ay kaa caawin doonaan inaad dhisayso olole dhiirrigelin ah oo lagu guuleysto isla markaana lagu hagaajiyo goobtaada waayeelka SEO Source .